शीतलनिवासलाई साक्षी’ राखेर मंसिरमा महाधिवेशन – Kadar News : Oneline Digital News:
प्रकासित : ३ श्रावण २०७७, शनिबार २३:५१
३ साउन, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुको दबावका बावजुद प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद नछाड्ने अडान लिइरहेका ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको प्रस्तावबारे दुबै अध्यक्षले सहमति भए–नभएको त केही
बताएनन् । तर, वैशाख २० को झल्को दिने गरी दुबै नेता प्रस्तुत भएको एक नेताले बताए ।
शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनको नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेको छन् । मंसिरमै महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यसबेलासम्म केपी ओलीले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये दुबै पद छाड्नु नपर्ने प्रचण्डले बैठकमा संकेत गरेका छन् ।
सचिवालय बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवासतिर लागेका
थिए । उनीहरु राति अबेरसम्म शीतलनिवासमै थिए ।
पार्टीमा अहिले देखिएको संकटको निकास महाधिवेशन भएको भन्दै उनले मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव राखे । ‘चैतमा गर्ने भनेकै छ, सकिन्छ भने मंसिरमा गरौं’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विचारको छलफल त्यस्तै हो, छलफल नगरेकै कारण एक भएर चुनावमा गयौं, पार्टी एकता भयो । छलफल ग¥यो भने बिग्रन्छ ।’
अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले छलफल–सहकार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव राम्रो भएको तर दुईजना मिलेपछि सबथोक हुन्छ भन्ने नठान्न ओली र प्रचण्डलाई चेतावनी दिए । पार्टीमा अहिले दलीय होइन, प्रवृत्तिमा समस्या रहेको भन्दै उनले हतारमा महाधिवेशन भइहाल्छ भन्ने विश्वास नलागेको बताएका छन् ।
‘विगतमा आलोपालो प्रधानमन्त्री भनियो, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने भनियो, तर कार्यान्वयन भएन,’ बैठकमा बरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘यो महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि बैशाख २० को जस्तै हुने हो
कि ? तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने पो हो कि ? त्यसैले लिखितरुपमा बैठकमा प्रस्ताव आउनुपर्छ ।’
नेकपाको अन्तरिम विधान (२०७५ को धारा १७ मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवशेनको मिति ‘केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।